Siddee Ku Ilaalin Kartaa Caafimaadka Indhahaada? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Khaalid Cabdirisaaq Caskar, March 29, 2018
Miski Cabdinuur Salal — September 20, 2019
Indhaha waa xubin muhiim u ah nolosha aadanaha waxa ayna qaabilsan yihiin aragga. Indhahu waa nuur, waana deeq alle bixiyo. Aqbaarta ugu badan ee maskaxda gaarta waa wax-yaalaha lagu arko indhaha. Aragga wanaagsan ayaa kaa caawinaya inaad si fiican u qabato howlahaada shaqo.
Siddeed Qodob Oo Aan Ku Ilaalin Karnaa Caafimaadka Indhaheenna?
1- Wax-yaalaha aan ku ilaalin karno caafimaadka indhaheenna waxaa kamid: In aan qaaddano mar walibo cunno dheelitiran, siddoo kale in aan badsanno cunista maalayga iyo qudaarta cagaaran.
2- In aan joogteeynno jimsiga maalin walibo, jimcisiga waxa uu kor u qaaddaa wareegga dhiigga, sidoo kale waxa uu ka qeyb qaataa qashin saarka indhaha.
3- In aan seexatid habeenkii hurda kugu filan, marka aad seexato habeenkii hurada kugu filan waxa aan dareemi doontaa nasiino, iyo firfircooni maalintii, caafimaadka indhahaadana waxa uu noqon doonaan kuwa wanaagsan.
4- In aan aan mar waliba aan dhaqno gacmaheenna, gaar ahaan marka aan taabano ookiyaalaha dadka indha ka xanuunsan ay wataan. Gacmaha waxaa korkooda saran bakteeriyo ilma aragta ah, indhaha si fudud ayeey kaaga saameyn kartaa caafimaadkooda.
5-Ka fogow cabista sigaarka. Sigaar cabiddu waxay indhaha ku keeni kartaa halis caafimaad daro.
6-Haddii aad tahay dadka badanaa isticmaalo aalada kumbuutarka isticmaal qaacidadda 20/20. 20 daqiiqqo waliba qaaddo 20 ilbiriqso oo nasiina ah.
7-Xiro ookiyaalaha ileyska celiya marka aad joogto meelaha aadka u sareeyo iftiinkooda,sidda marka gaariga la alxamaayo oo kale ileyska la isticmaalo.
8- Aaladaha iyo Iftiinka Buluugga.Waxaad u badan tahay inaad u isticmaasho aaladaha dhijitaalka ah,sidda mobeelada ama koombutarka saacado badan maalinkii xilliga shaqada iyo xilliga guriga aad joogtaba. Aaladahani waxay indhahaaga gelinayaan iftiin buluugga ah oo tamar badan qaaddanaayo.
Waxaa loo yaqaanaa iftiinka buluugga ah maxaa yeelay hirarka wareegga ee soo dhowaanaya waxay u dhow yihiin qaybta buluugga ah. Aaldahaan adigoo isticmaalayo wax-yaalaha caafimaadka indhahaada ku illaalin karto waxaa kamid ah:
B-Ka dhig shaashadda kombiyuutarkaaga ama moobeelka aad isticmaaleyso mid ka hooseeya heerka indhaha.
T- Habeenkii ileyska badan ee aaladaha iska illaali gaar ahaan xilliga mugdiga.
J-Isticmaal qaacidadada 20/20 ee aan kor kusoo xusanay.
Waxa aan bulshadeenna ugu baaqayaa in aan kor qaaddno caafimaadka indhaha, sidoo kale waa in ay dadka iska illaaliyaan in ay wax ku aqriyaan waraaqo cad cad qoraxda, taasoo keeni karta in ay caafimaadka indhaha ey wax-yeeleyso.
Tags: Siddee Ku Illaalin Kartaa Caafimaadka Indhahaada.
Next post Waa Maxay Eerno Oo Afka Qalaad Loo Yaqaano Hernia?.
Previous post Isticmaalka Saxsan Ee Bilaha Wareegsan ( )